Iindaba -Yintoni i-433Mhz RF kude?
Eyahlukileyo kwiRF2.4G, 433Mhz RF Remote Control ligunya elinamandla elinokudlulisa ulawulo lwentambo engenazingcingo. Umgama wokuhambisa ungaphezulu kwabanye kwaye unokufikelela kwiimitha ezili-100. Izitshixo ze-elektroniki ezizenzekelayo zisebenzisa i-433 Mhz njengolawulo olukude.
Ingqondo yonxibelelwano ye-433 Mhz inje: okokuqala, idatha eneekhowudi ezingaphezulu kunye nenqanaba levolthi ephantsi, zilayishwa kwisekethe ephezulu kwaye zithunyelwa esibhakabhakeni. Okwesibini, imodyuli efanayo yokufumana imodyuli inokufumana umqondiso. Ukuba inkqubo yokuhambisa umqondiso kunye nokufumana imodyuli kunemigaqo efanayo yokufaka iikhowudi, kwelinye igama, ukuba banefomathi efanayo kunye nedijithali yekhowudi yokuvumelanisa, ikhowudi yedilesi kunye nekhowudi yedatha, unxibelelwano luya kufumaneka. Umzekelo, ukuba okukude kusetyenziswa i-IC 2240/1527, ke, umthengisi owahlukileyo unemigaqo efanayo yokubhala, ubudlelwane bonxibelelwano bunokwakhiwa phakathi kwabo.
Ke, malunga ne-433 Mhz yokulawula kude, sifuna kuphela abathengi bethu ukuba babonelele ngedatha yevolthi yeqhosha ngalinye. Sinokubamba idatha ngesampulu yomlinganiso enikezwe ngabathengi bethu.
Ulawulo lwe-433 Mhz olukude luthetha ukuba isantya sayo sokuhambisa sikufutshane ne-433 Mhz elinqanaba elifanelekileyo lokuhamba rhoqo. Siphonononge i-100% yokuhamba rhoqo kunye namandla e-remote nganye ukuqinisekisa umgangatho ogqibeleleyo.
Imodyuli ye-transceiver engenazingcingo, ekwabizwa ngokuba yi-RF433 imodyuli encinci, isebenzisa itekhnoloji yokuhamba rhoqo kwirediyo. Iqukethe iinxalenye ezi-2. Inye ingumda wokuqala werediyo ye-IC ngaphambili eyaveliswa ngetekhnoloji epheleleyo yedijithali. Enye iATMEL AVR SCM. Yitransceiver encinci enesantya esiphezulu sonxibelelwano. Ikwanomsebenzi wokupakisha idatha, ukubhaqa impazamo kunye nokulungisa impazamo.
Izinto ezisetyenziswe kwi-433Mhz RG ekude yonke imigangatho yemizi-mveliso, izinzile kwaye ithembekile, ubungakanani obuncinci kwaye kulula ukuba ifakwe.
■ Izixhobo ze-POS ezingenazingcingo okanye izixhobo ze-PDA ezingenazingcingo, njl.
■ Inkqubo yokuhlola engenazingcingo okanye inkqubo yolawulo lofikelelo yolawulo lomlilo, ukhuseleko negumbi lekhompyutha.
■ Ukuqokelelwa kweenkcukacha kwezothutho, imo yezulu, imeko-bume.
■ Uluntu olunobuchule, isakhiwo esilumkileyo, inkqubo yolawulo lwendawo yokupaka.
■ Ukulawulwa okungenazingcingo kweemitha ze-smart kunye ne-PLC.
■ Inkqubo yokulandela umkhondo okanye inkqubo yokugcina impahla esizeni.
■ Ukufunyanwa kwedatha kwicandelo leoyile, icandelo legesi, i-hydrology kunye neyam.